Daawo: Xarun ay ku shaqeynayaan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta oo laga hirgelinayo Cadaado - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Daawo: Xarun ay ku shaqeynayaan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta oo laga hirgelinayo Cadaado
November 6, 2016 November 6, 2016 Duceysane3031 Comment on Daawo: Xarun ay ku shaqeynayaan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta oo laga hirgelinayo Cadaado
Xaruntan oo noqondoonta meel ay ku shaqeeyaan maxkamadaha iyo xeer ilaalinta, dadka maxkamaduhu xukumaana lagu hayndoono ayaa laga hirgalinayaa galbeedka magaalada Cadaado, waxaana maanta si wada jir ah u dhagax dhigay Madaxwayne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sareeyo Guud Bashiir Maxamad Jaamac iyo Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir.
Guddoomiyaha degmada Cadaado C/llahi C/raxmaan Tootoole ayaa sheegay in maamulka degmadu uu ku deeqay dhulkan oo ah hal KM oo isku weer ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in meeshan xabsi kaliya aysan noqon doonin balse xafiisyo xeer ilaalintu leedahay laga hirgalindoono, si ay u noqoto meel adeegyo dhamaystiran leh.
“Xabsiyada Soomaaliya waxaan doonaynayaa inaysan noqon baqaaro dadka lagu ciqaabo, balse meeshan waxaan u diyaarinaynaa in maxaabiistu daryeel iyo waxbarashaba ka helaan oo warshado yar yar ayaan ka hirgalinaynaa” ayuu yiri Bashiir Goobe.
Madaxwayne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay in tani ay tahay waxqabad muuqdo oo iskaashi dhinacyo badan ah ku hirgalay, ayna muujineyso sida ay muhiim ugu tahay in loo helo xarumo ay ku shaqeeyaan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta, si maxaabiista ay u helaan xaquuqdooda.
March 13, 2019 March 13, 2019 Cali Yare
1 thought on “Daawo: Xarun ay ku shaqeynayaan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta oo laga hirgelinayo Cadaado”